Be an entrepreneur | Career and job resources from USAHello | USAHello
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကိုကြည့်ဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုရေးသားခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, ညာဖက်ကလူငှားရမ်း, နှင့်မှတ်ပုံတင် ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကမှာ, စျေးဝယ်အများကြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာပြု. လက်ျာအသိပညာနှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးအနိမ့်စျေးနှုန်းမှာဖြစ်စေအမှုအရာသို့မဟုတ်သင်မဝယ် re-ရောင်းသောအရာတို့ကိုရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ငွေရှာနိုင်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
အကျိုးအမြတ်မယူသောလူကိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်. တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်မယူစတင်ရန်ဘယ်လို Read နှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကူညီ. ဆက်ဖတ်ရန်
Farm entrepreneurs build business togetherကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Farhan နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်, I’ve learned about his passion for providing his community with healthy fresh produce.
Aleppo Sweets sells delicious Syrian baklava onlineDavidson ကောလိပ်မှာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဒုက္ခသည်တစ်ဦးကိတ်မုန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ကူညီပေးသည်. သူတို့ကတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိတ်မုန့်ဖွင့်ဖို့ပိုက်ဆံမရှိကြ. ဒါကြောင့်သူတို့ကအွန်လိုင်းမှကိတ်မုန့်ဖွင့်လှစ်။